I-Anandamide VS CBD: Yikuphi Okungcono Empilweni Yakho?
Ikhaya > I-Anandamide VS CBD: Yikuphi Okungcono Empilweni Yakho? Konke Odinga Ukukwazi Ngabo!
I-Anandamide VS CBD: Yikuphi Okungcono Empilweni Yakho? Konke Odinga Ukukwazi Ngabo!
Yini i-Anandamide (AEA)
I-Anandamide (AEA), eyaziwa nangokuthi i-molecule yenjabulo, noma N-arachidonoylethanolamine (I-AEA), i-fatty acid neurotransmitter. Igama elithi Anadamida (AEA) lisuselwa kweleSanskrit of Joy “Ananda.” URaphael Mechoulam waqamba leli gama. Ukuthi, kanye nabasizi bakhe ababili, uWA Devane noLumír Hanuš, bathola kanjani okokuqala i- “Anandamide” ngo-1992. I-Anandamide (AEA) iyisilungiso esihle sezinkinga eziningi zomzimba nezengqondo.
Yini iCannabidiol (CBD)?
I-Cannabidiol (i-CBD) iyinhlanganisela yesibili esebenzayo kakhulu eyaziwa ngokuthi ama-cannabinoids atholakala ku- i-cannabis sativa (insangu noma i-hemp). I-Tetrahydrocannabinol (iTHC) yiyona edlange kakhulu futhi futhi iyi-cannabinoid ethinta ingqondo kakhulu etholakala esitshalweni se-cannabis. I-THC ihlotshaniswa nokuzwa ukuzwa "okuphezulu".
Kodwa-ke, i-CBD ayisebenzi ngokomqondo futhi itholakala esitshalweni se-hemp esiqukethe inani eliphansi le-THC. Le mpahla yenze i-CBD yathola ukuthandwa emkhakheni wezempilo nenhlalakahle.
Ngakolunye uhlangothi uwoyela weCannabidiol (CBD) utholakala esitshalweni se-cannabis ngokungeza i-CBD ekhishiwe kumafutha athwala njenge-hemp seed oil noma uwoyela kakhukhunathi.
I-Anandamide ne-Cannabidiol FAQ
Anandamide, eyaziwa nangokuthi i-N-arachidonoylethanolamine, iyi-fatty acid neurotransmitter etholakala kwimetabolism engeyona ye-oxidative ye-eicosatetraenoic acid, i-omega-6 fatty acid ebalulekile. Leli gama lisuselwa egameni lesiSanskrit elithi ananda, elisho ukuthi “injabulo, intokozo, injabulo”, naphakathi.
Ingabe i-anandamide yi-hormone?
Ucwaningo luhlinzeka ngesixhumanisi sokuqala phakathi kwe-oxytocin - ebizwa ngokuthi "i-hormone yothando" - ne-anandamide, eye yabizwa ngokuthi "i-molecule yenjabulo" ngendima yayo ekusebenzeni ama-cannabinoid receptors kumaseli obuchopho ukukhulisa ugqozi nenjabulo.
Ingabe i-anandamide iyajabulisa noma iyavimbela?
Ekuphetheni, ama-cannabinoid receptors ohlobo lwe-CB1 kanye ne-ligand yawo engapheli, i-anandamide, ayabandakanyeka ekulawuleni i-neuronal excitability, ngaleyo ndlela anciphise ukuhanjiswa kwe-neurotransmission kusayithi le-presynaptic, indlela engabandakanyeka ekuvikeleni ukujabula ngokweqile okuholela .
Yimaphi ama-endocannabinoids amabili acwaningwe kakhulu akhiqizwa ngumzimba ngokwemvelo?
Abaphenyi bacabanga ukuthi kungenzeka kube khona i-receptor yesithathu ye-cannabinoid elinde ukutholakala. Ama-endocannabinoids yizinto ezenziwe yimizimba yethu ukukhuthaza la ma-receptors. Ama-molecule amabili aqondakala kahle kakhulu abizwa nge-anandamide ne-2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Ngabe umzimba womuntu unohlelo lwe-cannabinoid?
Uhlelo lwe-cannabinoid olungapheli — olubizwa ngesitshalo esiholele ekutholeni kwalo — lungesinye sezinhlelo ezibaluleke kakhulu zomzimba ezibandakanyeka ekusunguleni nasekugcineni impilo yabantu. Ama-Endocannabinoids nama-receptors awo atholakala kuwo wonke umzimba: ebuchosheni, ezithweni, kwezicubu ezihlangene, kwizindlala, nakumaseli omzimba.
Iyini i-cannabinoid yokuqala etholakele?
Ngo-1992, ilebhu kaMechoulam yahlukanisa i-endocannabinoid yokuqala: i-molecule ekugcineni eyahlukaniswa njenge-agonist ye-CB1 receptor. Kwakhonjwa njenge-arachidonoyl ethanolamide kwathiwa i-anandamide.
Ingabe i-anandamide ushokoledi?
I-THC, noma kunjalo, ayitholakali kushokoledi. Esikhundleni salokho, elinye ikhemikhali, i-neurotransmitter ebizwa nge-anandamide, likhishwe ngoshokoledi. Kuyathakazelisa ukuthi i-anandamide nayo ikhiqizwa ngokwemvelo ebuchosheni.
Ingabe ushokoledi yi-cannabinoid?
I-Anandamide ibizwa nge-endocannabinoid ngoba yenziwa ngumzimba wethu futhi ilingisa ama-cannabinoids atholakala esitshalweni sensangu. Ngakho-ke, isithako sikashokolethi nesithako esitshalweni sensangu zombili ziyakwazi ukuvuselela uhlelo lobuchopho bethu lwensangu lwe-neurotransmitter.
Ngabe ushokoledi unayo i-theobromine?
I-Theobromine yi-alkaloid eyinhloko etholakala ku-cocoa noshokoledi. I-cocoa powder ingahluka enanini le-theobromine, kusuka ku-2% theobromine, kuze kufike kumazinga aphezulu azungeze i-10%. … Ngokuvamile kunokugxila okuphezulu ebumnyameni kunoshokoledi wobisi.
Yimaphi ama-cannabinoids ajwayelekile kakhulu?
Lezi zinhlayiya ezimbili eziyinhloko yi-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ne-cannabidiol (CBD). Okwaziwa kakhulu kulaba ababili yi-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), okuyikhemikhali elibhekele imiphumela yengqondo ye-cannabis.
Yini i-molecule yenjabulo?
I-Anandamide yikhemikhali yobuchopho engaziwa kancane ebizwa ngokuthi “i-molecule yenjabulo” ngendima eliyidlalayo ekukhiqizeni imizwa yenjabulo. … Isebenza ngokubophezela kuma-receptors afanayo ebuchosheni njengenhlanganisela eyinhloko ye-psychoactive ensangu.
Ingabe i-anandamide isidakamizwa?
Anandamide, i-ligand engapheli yobuchopho be-cannabinoid CB1 receptors, ikhiqiza imiphumela eminingi yokuziphatha efana naleyo ye-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), isithako esiyinhloko se-psychoactive ensangu.
Ngabe umzimba womuntu ukhiqiza ama-cannabinoids?
Ama-Endocannabinoids. Ama-endocannabinoids, abizwa nangokuthi ama-cannabinoid endogen, angama-molecule enziwe ngumzimba wakho. Ziyafana nama-cannabinoids, kepha akhiqizwa ngumzimba wakho.
Ingabe i-CBD iyayinyusa i-dopamine?
I-CBD futhi ivuselela i-adenosine receptor ukukhuthaza ukukhishwa kwe-glutamate ne-dopamine neurotransmitters. Ngokusebenzisana kwayo nama-dopamine receptors, kuyasiza ukukhulisa amazinga e-dopamine futhi kulawulwe ukuqonda, ukugqugquzela, nokuziphatha okufuna umvuzo.
Ingabe i-Indica ikhulisa i-dopamine?
kunciphisa ubuhlungu obukhulu. kwandisa isifiso sokudla. kwandisa i-dopamine (i-neurotransmitter esiza ukulawula umvuzo wobuchopho nezikhungo zobumnandi) ekusebenziseni isikhathi sasebusuku.
Uhlobo luni lwesidakamizwa ushokoledi?
Ngaphezu koshukela, ushokoledi unezinye izidakamizwa ezimbili ezine-neuroactive, i-caffeine ne-theobromine. Ushokoledi awugcini nje ngokuvuselela ama-opiate receptors ebuchosheni bethu, futhi ubangela nokukhishwa kwama-neurochemicals ezikhungweni zobumnandi bobuchopho.
Yini i-anandamide eyenzayo emzimbeni?
Imizimba yethu idala i-anandamide ngokufunwayo, ezosetshenziswa lapho kudingeka khona ukugcina i-homeostasis. I-Anandamide ikwenza lokhu ngokusiza ukulawula ukuvuvukala nokusayina kwe-neuron. Njengoba idaliwe, ibopha ngokuyinhloko ngama-cannabinoid receptors CB1 ne-CB2 njengama-cannabinoids afana ne-THC uma engenwa.
Luthini uhlelo lwe-cannabinoid receptor?
Ama-receptors e-Cannabinoid, atholakala kuwo wonke umzimba, ayingxenye yohlelo lwe-endocannabinoid, olubandakanyeka ezinqubweni ezahlukahlukene zomzimba kubandakanya ukuthanda ukudla, ukuzwa ubuhlungu, imizwa nenkumbulo. Ama-receptors e-Cannabinoid asekilasini lama-receptor membrane weseli kumndeni omkhulu we-G protein-coupled receptor.
Yimaphi amaqembu ahlukene asebenzayo akhona ku-anandamide?
Amaqembu asebenzayo e-Anandamide afaka ama-amide, ama-esters, nama-ether we-long chain chain polyunsaturated fatty acids, futhi ahlanganyela ngokuhlelekile ngama-pharmacophores abucayi ne-D-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Wanyusa kanjani amazinga e-anandamide ngokwemvelo?
Yidla ukudla okunothile kulezi zithelo futhi uvimbele ukukhiqizwa kwakho kwe-FAAH okwandisa amazinga akho e-anandamide! Ushokoledi okunye ukudla okungasiza ukukhulisa i-anandamide. Inenhlanganisela eyaziwa ngokuthi i-ethylenediamine evimbela ukukhiqizwa kwe-FAAH. Gcina lokhu kudla okuthathu engqondweni ngokuzayo lapho ungena esitolo.
Ngabe ushokoledi uqukethe i-anandamide?
Ingabe ushokoledi umuthi?
Ushokoledi unenani elikhulu loshukela. Ngaphezu koshukela, ushokoledi unezinye izidakamizwa ezimbili ezine-neuroactive, i-caffeine ne-theobromine. Ushokoledi awugcini nje ngokuvuselela ama-opiate receptors ebuchosheni bethu, futhi ubangela nokukhishwa kwama-neurochemicals ezikhungweni zobumnandi bobuchopho.
Uyini umuthi kushokoledi?
I-Theobromine yi-alkaloid eyinhloko etholakala ku-cocoa noshokoledi.
Iyiphi ikhemikhali ekhona kushokoledi?
I-Theobromine, phambilini ebiyaziwa nge-xantheose, iyi-alkaloid ebabayo yesitshalo sekhokho, nefomula yamakhemikhali C7H8N4O2. Kutholakala kushokoledi, kanye nakokunye ukudla okuningi, kufaka phakathi amaqabunga esitshalo setiye, ne-kola nut.
Ingabe ushokoledi uyayinyusa i-serotonin?
Kodwa-ke, ngoba ushokoledi uqukethe i-tryptophan, ukwanda okuvelayo kwe-serotonin kungasiza ekuchazeni ukuthi kungani umuntu engazizwa ejabule, ezolile, noma ekhathazekile kancane ngemuva kokudla ucezu lwekhekhe labo le-chocolate (iSerotonin).
Yini i-anandamide ebhekene nayo?
I-Anandamide idlala indima ekulawulweni kokuziphatha kokondla, kanye nesizukulwane se-neural sesisusa nenjabulo. I-Anandamide ejojowe ngqo ku-forebrain ehlobene nomvuzo wokwakheka kobuchopho i-nucleus accumbens ithuthukisa izimpendulo ezijabulisayo zamagundane ekunambithekeni okunomvuzo kwe-sucrose, futhi ithuthukise nokudla.
Ingabe i-CBD iyi-antioxidant?
I-THC ne-CBD zingama-antioxidants anamandla — anamandla kakhulu kuno-vitamin C no-E. Eqinisweni, i-US Government Patent 1999/008769 iqondene ngqo nezakhi ze-neuroprotectant ne-antioxidant zama-cannabinoids.
Yenzani i-enzyme ye-FAAH?
I-fatty acid amide hydrolase (i-FAAH) iyi-enzyme ehlanganisa ulwelwesi lwe-mammalian eyehlisa umndeni we-fatty amide we-endo native signaling lipids, ofaka i-endo native cannabinoid anandamide kanye ne-oceamide eyenga ubuthongo.
I-CBD iyithinta kanjani i-anandamide?
Ucwaningo lwe-Biochemical lubonisa ukuthi i-cannabidiol ingakhulisa ukusayina kwe-anandamide okungaqondile ngokungaqondile, ngokuvimbela ukonakala kwe-intracellular kwe-anandamide okwenziwe yi-enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Kusho ukuthini i-cannabinoid?
Igama i-cannabinoid libhekisa kuzo zonke izinto zamakhemikhali, noma ngabe zakhiwe kanjani noma zivelaphi, ezijoyina izamukeli ze-cannabinoid zomzimba nobuchopho futhi ezinemiphumela efanayo kulezo ezikhiqizwa isitshalo seCannabis Sativa. … Izidakamizwa ezimbili eziyinhloko i-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ne-cannabidiol (CBD).
Luyini uhlelo lwe-endocannabinoid futhi lwenzani?
Umzimba womuntu uqukethe uhlelo olukhethekile olubizwa nge-endocannabinoid system (ECS), olubandakanyekayo ekulawuleni imisebenzi ehlukahlukene kubandakanya ukulala, isifiso sokudla, ubuhlungu nokuphendula amasosha omzimba.
Ngabe umzimba unama-receptors we-cannabinoid?
Ama-receptors e-Cannabinoid, atholakala kuwo wonke umzimba, ayingxenye yesistimu ye-endocannabinoid, ebandakanyeka ezinqubweni ezahlukahlukene zomzimba kubandakanya ukuthanda ukudla, ukuzwa ubuhlungu, imizwa nenkumbulo. … Ngo-2007, ukuboshwa kwama-cannabinoids amaningana ku-G protein-coupled receptor GPR55 ebuchosheni kwachazwa.
Ingabe i-CBD inyusa i-anandamide?
Ngokuya ngemiphumela encike ekutholakaleni kwe-cannabinoid ye-CBD kumthethonqubo wokwesaba ofundile ochazwe ngenhla, i-CBD inyusa amazinga e-anandamide ngokuvimbela ukuphinda kutholakale futhi kulinyazwe i-FAAH.
Yikuphi i-cannabinoid esetshenziselwa ukukhathazeka?
Ngomthamo ophansi we-THC kanye nomthamo olinganiselayo we-CBD, iphrofayili ye-cannabinoid kaHarlequin ilungele kahle labo abalwa nezinkathazo abangenandaba nokujabula. I-terpene yayo eningi kakhulu i-myrcene, okukholelwa ukuthi inomphumela wokuphumula futhi isetshenziswe kuwo wonke umlando njengosizo lokulala.
Ingabe i-CBD iyasiza ukukhathazeka?
I-CBD ijwayele ukusetshenziselwa ukubhekana nokukhathazeka, kanye neziguli ezihlupheka ngenxa yokuswela ukuqwasha, ucwaningo lukhombisa ukuthi i-CBD ingasiza kubo bobabili ukulala nokulala. I-CBD inganikela ngenketho yokwelapha izinhlobo ezahlukene zobuhlungu obungapheli.
Ingabe utshwala buyasiza ukukhathazeka?
Utshwala buyisidambisi futhi buyacindezela obuthinta uhlelo oluphakathi lwezinzwa. Ekuqaleni, ukuphuza kunganciphisa ukwesaba futhi kususe ingqondo yakho ezinkingeni zakho. Kungakusiza uzizwe unamahloni kancane, kukunikeze amandla okuqina, futhi kukwenze uzizwe ukhululekile ngokujwayelekile.
Ngithola kanjani ukuthi nginexhala?
Ukuthola isifo sokukhathazeka, udokotela wenza ukuhlolwa komzimba, abuze ngezimpawu zakho, futhi ancoma ukuhlolwa kwegazi, okusiza udokotela ukuthi anqume ukuthi ngabe esinye isimo, njenge-hypothyroidism, kungenzeka yini sidala izimpawu zakho. Udokotela angabuza futhi nganoma imiphi imithi oyiphuzayo.
Yiziphi izidakamizwa okungafanele zithathwe nge-CBD?
Ama-anti-depressants (njenge-fluoxetine, noma i-Prozac)
Imithi engadala ukozela (i-antipsychotic, benzodiazepines)
Ama-antibiotic e-Macrolide (i-erythromycin, i-clarithromycin)
Imithi yenhliziyo (ezinye izivimbeli zesiteshi se-calcium)
Ingabe i-CBD iyayikhipha i-dopamine?
Izizwa kanjani i-dopamine ephansi?
Ezinye izimpawu nezimpawu zezimo ezihlobene nokushoda kwe-dopamine zifaka: amajaqamba emisipha, ama-spasms, noma ukuthuthumela. izinhlungu nezinhlungu. ukuqina emisipheni.
Ingabe i-caffeine inyusa amazinga e-dopamine?
I-caffeine, into esetshenziswa kakhulu ukusebenzisa izinto ezithikameza umzimba emhlabeni, isetshenziselwa ukukhuthaza ukuphaphama nokwenza ngcono ukuqapha. Njengezinye izidakamizwa ezikhuthaza ukuvusa (izikhuthazi kanye ne-modafinil), i-caffeine ithuthukisa ukusayina kwe-dopamine (DA) ebuchosheni, ekwenza kakhulu ngokulwa nama-adenosine A2A receptors (A2AR).
Iyiphi indlela esheshayo yokwengeza i-dopamine?
Yidla Amaprotheni amaningi
Yidla Amafutha Angagcwali
Yidla ubhontshisi weVelvet
Thola Ukulala Okunene
Thola Ilanga Elanele
Ingabe i-CBD iphakamisa i-serotonin?
I-CBD ayikhuphuli amazinga e-serotonin, kepha ingathinta indlela ama-receptors akho obuchopho asebenza ngayo kwi-serotonin esivele isesistimu yakho. Ucwaningo lwesilwane lwango-2014 luthole ukuthi umphumela we-CBD kulawa ma-receptors ebuchosheni ukhiqize imiphumela yokulwa nokucindezelwa nokulwa nokukhathazeka.
Ingabe i-CBD ingakusiza ubuchopho bakho?
Abaphenyi bakholelwa ukuthi ikhono le-CBD lokwenza ngokusebenza kohlelo lwe-endocannabinoid kanye nezinye izinhlelo zokufaka uphawu ebuchosheni kunganikeza izinzuzo kulabo abanezifo zemizwa. Eqinisweni, okunye kokusetshenziswa okufundwe kakhulu kwe-CBD ekwelapheni ukuphazamiseka kwemizwa okufana nesifo sokuwa kanye ne-multiple sclerosis.
Ngingawakhuphula kanjani amazinga e-serotonin?
Yimuphi uwoyela we-CBD ongcono kakhulu ongawuthenga ngokunciphisa umzimba?
I-Anandamide ngumlamuleli we-lipid osebenza njenge-ligo engapheli ye-CB1 receptors. Lawa ma-receptors nawo ayilitshe eliyinhloko lamangqamuzana elibhekele imiphumela yemithi ye-Δ9-tetrahydrocannabinol, isithako se-psychoactive ku-Cannabis sativa.
Uyenza kanjani i-anandamide?
Ihlanganiswe kusuka ku-N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine ngezindlela eziningi. Kwehliswe ngokuyinhloko yi-enzyme enamafutha e-fatty acid amide hydrolase (FAAH), eguqula i-anandamide ibe yi-ethanolamine ne-arachidonic acid.
Ingabe umzimba womuntu uyayikhiqiza i-CBD?
Ongase ungakuqapheli, nokho, ukuthi lokhu kulandela iqiniso lokuthi umzimba womuntu empeleni ukhiqiza ama-cannabinoid awo angapheli: okufana nemvelo kwamakhemikhali atholakala esitshalweni se-cannabis, njenge-THC (tetrahydrocannabinol) ne-CBD (cannabidiol).
Ingabe i-CBD inkulu kangako?
Abukho ubufakazi, ngokwesibonelo, bokuthi i-CBD ilapha umdlavuza. Kunobufakazi obulinganiselayo bokuthi i-CBD ingathuthukisa ukuphazamiseka kokulala, ubuhlungu be-fibromyalgia, ukuqina kwemisipha okuhlobene ne-multiple sclerosis nokukhathazeka. UDkt Levy uthi: “Inzuzo engiyibone njengodokotela kakhulu ekwelapheni izinkinga zokulala, ukukhathazeka nobuhlungu.
Ingabe imikhiqizo ye-CBD iphephile?
Ukusetshenziswa kwe-CBD kubuye kube nezingozi ezithile. Yize kuvame ukubekezelelwa kahle, i-CBD ingadala imiphumela emibi, njengomlomo owomile, isifo sohudo, ukunciphisa ukudla, ukozela nokukhathala. I-CBD ingaphinde ihlanganyele neminye imithi oyiphuzayo, efana nabanciphisi begazi.
Yenzani i-CBD ebuchosheni?
Lezi zimfanelo zixhunyaniswe nekhono le-CBD lokwenza ngokuthola ama-receptors ebuchosheni be-serotonin, i-neurotransmitter elawula imizwa nokuziphatha komphakathi. Isifinyezo Ukusebenzisa i-CBD kukhonjisiwe ukunciphisa ukukhathazeka nokudangala ezifundweni zabantu nezilwane.
I-CBD ishiya ngokushesha kangakanani uhlelo?
I-CBD ihlala ohlelweni lwakho izinsuku ezi-2 ukuya kwezi-5, kepha lelo banga alisebenzi kuwo wonke umuntu. Kwabanye, i-CBD ingahlala ohlelweni lwayo amasonto.
I-Anandamide yenziwe nge-enzymatic ezindaweni zobuchopho ezibalulekile kwimemori, izinqubo zokucabanga nokulawulwa kokuhamba. Ucwaningo luphakamisa ukuthi i-anandamide idlala indima ekwenziweni nasekuqhekekeni kokuxhumeka kwesikhashana phakathi kwamangqamuzana ezinzwa, futhi lokhu kuhlobene nokufunda nokukhumbula.
Ingabe i-anandamide iyi-cannabinoid?
Ebizwa nangokuthi i-N-arachidonoylethanolamine (AEA), i-anandamide ixhumana nama-receptors emzimbeni we-CB ngokufanayo kuma-cannabinoids afana ne-THC. I-ejenti ebophayo ye-neurotransmitter ne-cannabinoid-receptor esebenza njengesithunywa sesiginali sama-receptors e-CB asemzimbeni.
UMallet PE, uBeninger RJ (1). "I-endo native cannabinoid receptor agonist anandamide iphazamisa imemori kumagundane". Ukuziphatha Kwemithi. 1996 (7): 3–276
UMechoulam R, uFride E (2). "Umgwaqo ongagandayiwe oya ezingqondweni ze-endo native cannabinoid ligands, i-anandamides". Ku-Pertwee RG (ed.). Ama-cannabinoid receptors. IBoston: I-Academic Press. emakh. 1995–
(3) .URapino, C.; IBattista, N.; UBari, M .; IMaccarrone, M. (2014). "Ama-Endocannabinoids njengama-biomarkers wokukhiqiza kabusha komuntu". Ukuvuselelwa Komuntu. 20 (4): 501-516.
(4).(2015). I-Cannabidiol (i-CBD) kanye nama-analogs ayo: ukubuyekezwa kwemiphumela yokuvuvukala. I-Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23 (7), 1377-1385.
ICorroon, J., & Phillips, JA (5). Isifundo Esinqamula Esigabeni Sabasebenzisi beCannabidiol. Ucwaningo lwe-cannabis kanye ne-cannabinoid, 2018 (3), 1-152.
(6).Isikhungo Sikazwelonke Semininingwane Ye-Biotechnology (2020). Isifinyezo sePubChem Compound seCID 644019, iCannabidiol. Ibuyiswe ngo-Okthoba 27, 2020, kusuka ku- .
(7) .R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J.,… noC Silva, A . (2014). Imiphumela efana ne-anti-depressant kanye ne-anxiolytic-efana ne-cannabidiol: ikhemikhali ehlanganisa i-Cannabis sativa. I-CNS ne-Neurological Disorder-Okuqondiwe Kwezidakamizwa (Phambilini Okukhonjiwe Ngezidakamizwa Zamanje-i-CNS kanye Ne-Neurological Disorders), 13 (6), 953-960.
Ukubusisa, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (8). I-Cannabidiol njengokwelashwa okungenzeka kube nezinkinga zokukhathazeka. I-Neurotherapeutics: iphephabhuku le-American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 12(4), i-825-836.
(9).I-Anandamide (AEA) (94421-68-8)
(10).Uhambo lokuhlola i-egt.
(11).I-Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yemilingo yempilo yakho
(12).Konke odinga ukukwazi mayelana ne-nicotinamide riboside chloride.
(13).Izithasiselo ze-Magnesium l-threonate: izinzuzo, isilinganiso, nemiphumela emibi.
(14).I-Palmitoylethanolamide (ipea): izinzuzo, isilinganiso, ukusetshenziswa, ukwengeza.
(15).Izinzuzo eziphezulu zezempilo eziyi-6 zezengezo ze-resveratrol.
(16).Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(17).Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(18).Isengezo esihle kakhulu se-alpha gpc.
(19).Isengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga se-nicotinamide mononucleotide (nmn).
I-Anandamide kushokholethi empeleni ingagxila, kepha yephuke ngokushesha ukuze ingasizi ngalutho.
Umthamo olinganiselayo we-anandamide wenza kusebenze CB1 ukunciphisa indlela efana nokwethuka. Kepha ngamanani aphezulu, i-anandamide nayo yaqala ukwenza kusebenze isiteshi se-ion TRPV1, esaphikisana nomphumela we-anandamide's anxiolytic.
Lokhu kubizwa ngokuthi yi- “biphasic” noma “U-shaped” response response.
I-Anandamide ikhiqizwa emizimbeni yethu ngenkathi iTHC kanye ne-CBD kukhiqizwa ezitshalweni.
I-Anandamide isebenza ngomlomo.
Ukufuna nje ukuthi i-athikili yakho kuyamangaza. Ukucaca kokuthunyelwe kwakho kumnandi nje nokuthi ngicabanga ukuthi ungungoti kule ndaba. Ngokuhambisana nemvume yakho ake ngibambe okuphakelayo kwakho kwe-RSS ukuze uhlale usesikhathini ngokuthunyelwe okuseduze. Ngiyabonga isigidi futhi ngicela uqhubeke nomsebenzi othokozisayo.
I-CBD ivimbela i-FHAA ekwephuleni i-Anandamide okuyiyona enikela ekwehliseni okukhulu kokukhathazeka kanye nokunciphisa ukuvuvukala emzimbeni.
Ngifunde izinto ezimbalwa ezisho imiphumela ejabulisayo evela ku-Anandamide uqobo, ngabuye ngafunda ukuthi othile uthathe ukukhishwa kweTheobroma Caocao futhi waba nemiphumela emihle. Mhlawumbe ngizobheka lokho ngaleso sikhathi.
Kunezinhlayiya ezimbili ezihlukile ze-cannabinoid emzimbeni: i-CB1 ne-CB2. I-THC isebenza njenge-agonist ku-CB1 eholela ekubulaleni i-dopamine.
I-THC ne-CBD zombili zingama-phytocannabinoids, kanti i-anandamide iyi-cannabinoid engapheli (ikhiqizwa yimizimba yethu)
Lapho i-THC ibopha ku-CB1 isebenzisa i-G-Protein Coupled receptor ezosebenza nge-enzyme kanye / noma isithunywa sesibili. Umphumela walawa ma-GPCR uholela emiphumeleni eminingi, efana ne-anti-nausea, ukuzola, nokuqeda ubuhlungu.
Kungasiza ukucabanga ngayo njengedivayisi yeRube Goldberg - iTHC ibophezela kumamukeli we-CB1, owenza i-GPCR isebenze, esebenzisa ezinye izindlela eziningi.
Sine-receptors ye-cannabinoid, i-CB1 ne-CB2 receptors enembile. Ama-receptors e-CB1 lapho evulwa, noma ngabe avela endocannabinoids ngokwemvelo noma enziwe ngokwenziwa noma ngokwenzeka ngokwemvelo, avimbela izithunywa eziningi zamakhemikhali. Enye yazo i-neurotransmitter GABA, yona uqobo evimbela ukukhishwa kwe-dopamine, ikunikeze ingxenye yalokho okuzwayo kusuka kukhula. Kunamakhulu ama-cannabinoids angenza kusebenze lawa ma-receptors amabili, futhi kukhona ama-receptors ambalwa amanoveli angafundwanga kahle ukuthi ama-cannabinoids amaningi nawo anokuhlangana okubophayo.